I-China pp engenalutho ishidi likasilika lijikeleza ungqimba lomkhiqizi nomhlinzeki | Sihai
Kk Ishidi lukathayela lisetshenziswa kakhulu kusilika osebenzisa ukupakisha, amasitoko, ukuthunyelwa, ishede. Ishidi le-pp likathayela likasilika liphothwa lenziwe ngezifiso, liyiphedi lesendlalelo lama-silkspins ahlukile futhi avikelayo.
Iphakethe lethu lesendlalelo leshidi elingenalutho le-silika spins lenziwe ngokwezifiso ungqimba oluphindwe kabili lweshidi elingenalutho lokubhanqa ndawonye, ​​iphedi lesendlalelo linemigodi eminingi ebhodini lezingqimba ezimbili, uhlangothi olulodwa izimbobo ezinkulu, olunye uhlangothi izimbobo ezincane zokulungiswa kwama-spins lapho upakisha ama-pallet, kuhle ukuthi kulungiswe ama-spins futhi kuvikelwe ama-spins ekuthumeleni. Imvamisa, iphedi yesendlalelo se-spins ingu-4-6mm obukhulu bukathayela webhodi eyenziwe ngocingo eyenziwe ngezifiso eyenziwe, ingenziwa ibe namandla kakhulu futhi iphrinte ilogo yangokwezifiso.
I-pad ye-silika spin ungqimba lwenziwe ngephepha elingenalutho, linesisindo esincane, alinamanzi, lihlala isikhathi eside, liqinile, liyifomu efanayo, indawo ebushelelezi, ukumelana nokushisa okuhle, amandla aphezulu womshini, ukuzinza kwamakhemikhali okuhle kakhulu nokufakwa kwegesi, izici ezingezona ezinobuthi. Kungaba ngokuya ngohlelo lokusebenza olwehlukile engeza izinto ze-ESD ezenziwe nge-ESD pp ishidi elingenalutho lesendlalelo sephedi, engeza izinto ze-UV ezenziwe nge-UV zivikele amaphepha wensimbi wensimbi osebenza ngaphandle.
Langaphambilini pp elingenalutho ungqimba pad
Olandelayo: pp unogada wesihlahla